Izindaba - Ukudluliswa okuzenzakalelayo komshini weSandblasting Ububanzi obusebenzayo
Ukuze ipuleti, ipuleti, ibhokisi, iphrofayili nokunye ukucwiliswa okukhethekile okumise okwenziwe ngoseyili, njengoku: ipuleti lensimbi engagqwali, insimbi ejwayelekile, insimbi yengilazi, itshe, i-titanium, i-pan, i-toast oven, ikesi lekhompyutha, ukusebenza, iphaneli le-DVD, incwajana, i-motherboard yekhompyutha, ipuleti lensimbi, okuhlobisa, ukukhangisa ibheji, imishini yokuxhumana, ipuleti le-aluminium, njll.
Lo mshini we-sandblasting wuhlobo lokuhambisa oluzenzakalelayo lomshini we-sandblasting, ongakhiwa ngokukhethekile futhi wenziwe ngokuya ngezimpawu zomkhiqizo wenkampani yakho. Inezici zokusebenza okulula, ukusebenza kahle okuphezulu, usayizi wezinhlayiyana ohlukile ungashintshwa ngokuya ngezidingo ezihlukile zenqubo, ukusetshenziswa kwesihlabathi okuzenzakalelayo komjikelezo, ukonga izindleko nokunye.
Ngenxa yengcuphe engaba khona yezingozi zomlilo ezidalwe yizinhlansi kumqoqi wothuli, kuyadingeka ukugwema ukuxuba izinto ezinokutsha ezifana nokupholisha i-flannelette, iphepha, uthuli lwokhuni kanye ne-magnesium powder nothuli olwenziwe ngesikhathi senqubo yokugaya izinsimbi zensimbi.
Ngaphansi kwezimo, opharetha bemishini bavunyelwe ukuphonsa osikilidi abangashiswanga noma ezinye izinto ezivuthayo ezintweni zokulawula uthuli noma amapayipi.
Ukuze uqaphele, abasebenzisi bemishini ye-JCK kufanele babonisane futhi bahambisane namakhodi omlilo kazwelonke nawasendaweni noma amanye amakhodi afanele lapho kunqunywa indawo yokufaka i-precipitator nangaphambi kokuyisebenzisa.
Uma kwenzeka ukuthi umqoqi wothuli asetshenziselwe ukuqoqa uthuli oluvuthayo noma oluyiziqhumane, umqoqi wothuli kufanele afakwe ngaphandle kwesitshalo. Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuthi uthintane nabasebenzi bokufakwa kwezicishamlilo abazijwayele izingozi zomlilo kanjalo nemithetho yendawo, futhi bancome futhi bafake imishini yokulwa nomlilo ehambisanayo. Umqoqi wothuli uqobo akanayo imishini yokulwa nomlilo.
Kwezinye izimo, kuyadingeka ukusetha ukuphuma. Ngale njongo, thintana nomshuwalense noma thintana neNcwajana yeNational Fire Protection Association ukuze ubone ukuthi iyiphi indawo efanelekile yokuqhuma. Okokusebenza kokulawula uthuli kufakwe endaweni yokusebenzela, umoya wayo ongaphezulu kufanele uholelwe ngaphandle ukuze unciphise ukuqhuma kwesibili. Ngakho-ke, ngicela ubonane neminyango efanele ukuthola indlela efanelekile yokuvota Lapho u-oda, uma kungekho mfuneko ekhethekile, isisusi sothuli imvamisa asifaki umnyango wokusiza wokuqhuma.
Umqoqi wothuli we-cartridge ulungele izindawo zokususa uthuli ngaphansi kokushisa kwemvelo ukuqoqa uthuli olumisiwe nezinhlayiya. Noma ngabe isetshenziselwa ukulawula ukungcoliswa komoya noma njengengxenye yenqubo yokukhiqiza, umqoqi wothuli we-cartridge angaqinisekisa ukuqoqwa kothuli okusebenzayo nokuqhubekayo.